MODE & TENDANCES : MISS JEUNESSE MADAGASCAR 2017 - TVMADA - RADIOMADA
TVMADA - RADIOMADA > MODE > MODE & TENDANCES :
Toy ireo firenena maneran-tany dia misy hatrany ny fifaninanana hatsaram-bika sy hatsaran-tarehy ho an’ireo tovovavy liana amin’izany teto amintsika teto Madagasikara. Anisan’izany ny fifaninanana « Miss Jeunesse Madagascar 2017 » izay fifaninanana hifantenana ireo tovovavy tsara tarehy sy tsara bika indrindra amin’ireo nifaninana eo anelanelan’ny 15 ka hatramin’ny 19 taona.
Tovovavy maro no nandray anjara tamin’izany, fa ankoatra ny bika aman’endrika dia anisan’ny fomba nifidianana izay ho « Miss « ihany koa ny resaka fahalalana sy faharanitan-tsaina ary tetik’asa sosialy entiny hanampiana ny fiaraha monina. Tonga nanatrika ity fifaninanana ity ny fikambanana maneran-tany « Miss Jeunesse World » izay nahitana delegasiona maromaro ary ny “Miss Jeunesse World”Ramatoakely Emelie Techer.
Nivoaka ho mpandresy tamin’ity fifaninanana “Miss Jeunesse Madagascar 2017” ity i Ramatoakely Razafimahaleo Daniella. Izy no hita fa nameno ny fepetra notakian’ireo mpitsara ka nandrombaka ity laharam-boninahitra ity.
Izy noho izany no hisolotena an’I Madagasikara any La Frantsa amin’ny tohin’ny fifaninanana sy ny fampiofanana. Hisy ny fitsidihana an’I La Frantsa ka anisan’izany ny Oniversiten”I Bordeaux izay toerana nianaran’ny “Miss Jeunesse World”.
Hisy ihany koa ny fanampiana azy amin’ny fanatanterahana ny tetik’asa izay nolazainy nandritra ny fifanitsanana izay mifantoka amin’ny fanampiana ireo tanora satria raha tsy misy, hoy izy, ny fanomezana asa sy fanampiana ireo tanora dia hahatonga azy ireny hivarilavo amin’ny zava-mahadomelina.
Anisan’ny fomba anakiray hahalalan’izao tontolo izao ny fifaninanana toy itony satria fifaninanana iraisam-pirenena ny “Miss Jeunesse World” ka firenena maro no mandray anjara amin’izany. Inoana fa hitondra vokatsoa na ho an’I Ramatoakely Razafimahaleo Daniella izany na hoan’ny firenena mihitsy aza ary iriana ny hitondrany lavitra ny voninahim-pirenena amin’ity fifaninanana ity.
MISS JEUNESSE MADAGASCAR